ဒေါင်းတမာန်: 04/12/2009 - 04/19/2009
Several lakh people living in the coastal areas of Bhola district are highly vulnerable to cyclones and tidal surges as the shelters constructed the purpose are too inadequate to accommodate the large number of people during natural disasters.
Around 1.5 lakh families living in chars (island) of high-risk coastal areas in seven upazilas under Bhola district are outside cyclone shelter coverage, said sources at Cyclone Preparedness Programme office in Barisal.
After super cyclone `Sidr' wreaked havoc in the southern region of the country in November 2007, the government took an initiative to build 20 cyclone shelter-cum schools in seven upazilas of Bhola district but it is too inadequate to meet the requirement.
According to the report ofasurvey conducted by district Red Crescent
Society, there are no shelter centres in Ramdaspur, Ramdevpur, Gameshpur, Char Sitaram, Baraipur, Char Pangacshia, Char Chakimara, Char Shyampur, Char Hossain, Gazir Char under Sadar upazila.
Same is the situation in Madanpur Char, Togbi, Medua, Neyamatpur, Bhavanipur, Hajipur under Daulatkhan upazila, Char Patila, Char Rizvi, Char Shamsuddin under Borhanuddin upazila, Char Nasrin, Char Mozammel, Char Tozammel, Char Luxmi under Tamijuddin upazila, Char Hasina, Char Alam, Char Ashraf, Char Sikender under Char Fashion upazila, Kalatolir Char and Dalchar under Monpura upazila.
Other char areas without cyclone shelters include Dhal Char, Char Kukri Mukri, Char Motahar, Char Sakuchia and Char Zahiruddin.
On an average, about 5,000 families live in each of the chars.
There are shelter centres at Char Zahiruddin under Tajumuddin upazila, Char Nizam under Monpura upazila, Char Kukurmari, Dalchar and Char Patila under Char Fashion upazila but their accommodation capacity is much less than the population.
Char Nizam has one cyclone shelter for six thousand people and Nijhum Dwip has four cyclone shelters for 20 thousand people.
For 1,04,000 inhabitants of Manpura upazila of island district Bhola, there are only 28 cyclone shelters and two matir kella (multi-storied mud houses) to accommodate only 22,400 people.
In Char Fashion upazila of the same district, only 15 cyclone shelters and 18 mud houses are available for its 4,15,520 residents.
According to Cyclone Preparedness Programme office,atypical cyclone shelter can accommodate around 800 people but as many as 3,000 people huddle inacentre when faced with the menace.
In absence of adequate cyclone shelters, the people in the coastal areas including Bhola district pass their days amid panic when there is warning for natural disasters like cyclone and tidal surge.
The situation is even worse in remote islands off the coast.
Construction ofalarge number of shelter centres is needed to save the large number of people from the menace.
Md Ershad Ali, an official at district Relief and Rehabilitation Office, said the department had not got any sanction for construction of more cyclone shelters in the coastal island areas.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, April 18, 20090comments
Tropical Storm BIJLI is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Cox's Bazar (21.4 N, 92.5 E)
Storm Alert issued at 17 Apr, 2009 18:00 GMT (Final Warning)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ဖို့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ အထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရှေ့လမှာ လွှတ်ပေးပါလို့ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ဂလိုရီယာအာရိုယို က မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
အရင်သီတင်းပတ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တယားကမ်းခြေမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံဆက်စပ် ထိပ်သီးညီလာခံမှာ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဂလိုရီယာအာရိုယို နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်တို့ တွေ့ဆုံစဉ် အခုလို တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ချစ်ကြည်ရေးဟာ အကြီးအကျယ် တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်လို့ သမ္မတ အာရိုယိုက ပြောဆိုပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ရဲ့ ဒီတိုက်တွန်းချက်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ အလေးထားတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆက်ပြီးကျင်းပဖို့ စိုင်းပြင်းနေတယ်လို့ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘီဂျလီကို စိုးရိမ်၍ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြ
သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ 17 2009 17:54 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဘီဂျလီ မုန်တိုင်း သတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် စိုးရိမ်နေသော နာဂစ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ကျေးလက် ဒေသခံအချို့ ကုန်းတွင်းပိုင်း ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့မှုများ ရှိနေကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောသည်။
“တောက လူတွေကတော့ တက်လာကြပြီ။ မနေ့က ညနေကနေ ဒီနေ့လည်း အများကြီးပဲ။ ကျနော်တို့ မြို့ပေါ်ကို တက်လာကြတယ်။ ရွာတိုင်းလိုလို တက်လာကြပြီ။ ဟိုတခါ ဖြစ်ကတည်းကနေ ကြောက်နေကြတယ် ဆိုတော့ သိပ်ကြောက်နေကြတယ်လေ။ လေတော့ အခုထိ တိုက်နေတာပဲ။ ရွာတွေက ရွှေ့လာတာတော့ ထောင်ဂဏန်း အထက်လောက် ရှိမယ်” ဟု ဧရာဝတီိတိုင်း လပွတ္တာမြို့ခံတဦးက မဇ္ဈိမသို့ ဆိုသည်။
လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်း ကညင်ကုန်း၊ ရွာမကြီး အပါအဝင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ အုပ်စု ထက်မနည်း ရှိနေရာ ရွာသား အများအပြားသည် မြို့ပေါ်ရှိ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား၊ သရက်တော ဘုန်းကြီးကျောင်း အပါအဝင် ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများ၏ နေအိမ်များသို့ လာရောက် ခိုလှုံနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ငပုတောမြို့နယ် သင်္ကန်းကုန်းရွာမှ ကျေးရွာသူ တဦးကလည်း “ဒီနေ့မနက် အစောကြီးကနေ သမီးတို့ရွာကို တက်လာကြတယ်။ တောင်ကလေးရွာ၊ အောက်ပြွန်ဝရွာတို့က လူတွေ တက်လာတယ်။ သူတို့ အသိအိမ်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပေါ့။ အောက်ပြွန်ဝရွာကဆို တရွာလုံး တက်လာကြပြီ။ သမီးတို့ကတော့ အိတ်တွေတော့ ထုတ်ထားတာပဲ။ သမီးတို့ရွာက နည်းနည်းမြင့်တယ်လေ။ နာဂစ်တုန်းကတော့ တော်တော်လေး သေကြတယ်။ အခု သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သဘောင်္လည်း မရှိဘူး။ တချို့ ပုသိမ်တို့ သွားကြတယ်လေ။ အခုတော့ အထုပ်တွေ ပြင်ထားပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဘိုကလေးမြို့ခံတဦး က “MRTV4ကနေ ကြေညာနေတာ ကြည့်ပြီး လူတွေက ကြောက်နေတယ်။ … ရွာကလူတွေက ဒီမနက်မှ တက်နေဆိုတော့ လာကြမှာပဲ။ နောက်ထပ် လာမယ့် သတင်းက ဘာမှ မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိဝိရိယနဲ့ ပြင်ဆင်နေရတာပေါ့။ အရင်လို ပစ်စလက်ခတ် မနေတော့ဘူးပေါ့နော်” ဟု ပြောသည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ဗဟိုပြု ရွေ့လျားနေသော ဘီဂျလီမုန်တိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေရာ မြေပြင်ရေပြင်လေသည် တနာရီ မိုင် ၈ဝ ခန့်အထိ တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသ သတင်းဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်ကို နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုက ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်။
“မုန်တိုင်းဖြတ်ကျော်စဉ် မုန်တိုင်းဒီရေသည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် (၆ ပေမှ ၁၂ပေ ခန့်) မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် (၄ ပေမှ ၆ ပေခန့်) မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး ဒီရေလှိုင်းများကို ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ တလျောက်တွင် ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။“ ဟု သတင်းတွင် ပါရှိသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, April 17, 20090comments
SPDC and DKBA-sponsored forced labour, arbitrary arrests and extortion
The SPDC and DKBA make regular forced labour demands on Thaton residents, forcing villagers (and prisoners) to work on road construction, porter SPDC/DKBA supplies and gather and deliver thatch that is used for military purposes. Additionally, SPDC/DKBA patrols often demand2or3villagers to help carry supplies and also use villagers as guides during military offensives.
For example, in September 2008, SPDC LIB #8, combined with DKBA soldiers led by Pah Gkleh, entered Htee Wah Bpoo village and forcibly conscripted two villagers to work for the force and then went on to conscript an additional villager from an ethnic-Shan village in Thaton District. Following these conscriptions, the combined SPDC/DKBA force was attacked by KNLA troops when they arrived in the area around Gkyeh Chyin Ka. Two conscripted villagers, Saw Ta Kheh and Saw Yay Lay, were killed during the fighting and another villager was hospitalized for wounds sustained during the fighting.
Another example of DKBA abuses occurred on January 28th 2009 when DKBA commander Thet Htoo entered Gru Shee village and arrested two villagers: 47-year-old Saw G--- and 46-year-old Naw T---. Commander Thet Htoo accused these villagers of having communicated with KNLA soldiers in the area and also accused them of feeding and hiding KNLA troops. Thet Htoo ordered these villagers to show him the location of the KNLA camp. The villagers denied Thet Htoo's accusations and said that they did not know the location of the KNLA. Thet Htoo ordered that the villagers' hands be bound. He then proceeded to beat both of them. Subsequently, on January 30th 2009, Thet Htoo ordered that residents of Pwo village were not allowed to leave the village boundaries and that anyone found outside the village would be punished.
KHRG field researchers report that SPDC forces operating in Thaton District have been losing trust in the DKBA because the latter has not been as active as before. In previous years, when DKBA soldiers conducted operations amongst villages in Thaton District, the SPDC supported them with rations, money and weapons. Now, as DKBA units in Thaton District have become less active, they are no longer as substantially supported by the SPDC and have consequently had to find other ways to finance their activities (such as forcing villagers to buy the photographs and calendars pictured in this report).
The photograph on the left showsastack of calendars produced by the DKBA that villagers in Bilin Township were forced to purchase. Every household was required to buyacalendar for 2,500 kyat (US $2.46). The money collected by the village head of T--- village is shown on the right.
The photograph on the left showsastack of calendars produced by the DKBA that villagers in Bilin Township were forced to purchase. Every household was required to buyacalendar for 2,500 kyat (US $2.46). The money collected by the village head of T--- village is shown on the right. Both photographs were taken in October 2008.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, April 15, 20090comments
ဒီကေဘီအေနှင့် စစ်အကြမ်းဖက် န၀တ ပူးပေါင်းတပ် ကေအဲန်ယူအား ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်
ဧပြီလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ)၏ အဓိကကျသည့် တပ်ရင်းတခုအား ဒီကေဘီအေနှင့် မြန်မာစစ် အစိုးရတပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ဆက်လက်ထိုးစစ် ဆင်နေသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ) လက်အောက်ခံတပ်ရင်း (၂၀၁) အခြေစိုက်ရာ ဝေါလေခီး တပ်စခန်း အား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ)နှင့် စစ်အစိုးရ ပူးပေါင်းတပ်တို့ ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေတပ်ရင်း(၉၀၆)၊ (၉၀၇) ပူးပေါင်းအင်အား ၂၀၀ ခန့်သည် ယမန်နေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ခန့်က ကေအဲန်ယူ (၂၀၁) တပ်ရင်း အခြေစိုက်စခန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ထိုးစစ်ဆင်ရာ ပူးပေါင်းတပ်မှ ၇ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောလှငွေ က ပြောသည်။
“အဲဒီ (၂၀၁) စခန်းနားမှာ ကပ်ပြီးတော့ ၀ိုင်းထားတယ်။ ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ သူတို့ကြံနေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကိုဖယ်ပြီးနေရာယူဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲ။ သူတို့က သုံးလေး နေရာ လောက်ခွဲပြီးတော့ သူတို့ဝင်နိုင်မယ့်လမ်းတွေ ရှာနေတယ် အဲလိုပဲခန့်မှန်းရ တာပေါ့။” ဟု နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ၏ အဓိက တပ်စခန်းဖြစ်သည့် တပ်ရင်း(၂၀၁) ဝေါလေခီး အခြေစိုက်စခန်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ဒီကေဘီအေက ရှေ့တန်းတက်ပြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကာ မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်က နောက်တန်းမှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ကူပစ်ပေးခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကြားခံ၍ညှိနိုင်းဆွေးနွေးရန်ပြောနေချိန်၌ နယ်စပ်တလျှောက် စစ်ဆင်ရေးများ တိုးမြင့်လာခြင်းသည် စစ်အစိုးရမှ ကေအဲန်ယူနှင့် ဆွေးနွေးရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း ပြသသည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“စကားပြောဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေကောင်းတွေ ရာသီဥတုကောင်းတွေ မဖန်တီးပဲနဲ့ တဖက် ကနေပြီး ဆန္ဒမရှိကြောင်း ပြသတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေ့ါ။”
ယခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဝေါလေခီး စခန်းသည် ထိုင်းနယ်စပ်နှင့် ချောင်းတခုသာခြားသဖြင့် နှစ်ဖက်တပ်များ နယ်မြေကျော်ဝင်လာမှုမရှိစေရန် နယ်စပ်တလျှောက်တွင် ထိုင်းနယ်ခြား စောင့်တပ်များက လုံခြုံရေး အင်အား တိုးမြင့် ချထားသည်ဟုသိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒီကေဘီအေတပ်များ လာရောက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းသည် အမျိုးသားအကျိုး စီးပွားကို ရှေ့ရှုခြင်း မဟုတ်ပဲ အဖွဲ့တခု၏ အကျိုးစီးပွားကိုသာ အဓိကထားနေခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
ဒီကေဘီအေနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ပူးပေါင်းတပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က ကေအဲန်ယူ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၂၀၁)၏ ရှေ့တန်းပျောက်ကျားစခန်းတခုအား ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အခြေစိုက်စခန်းအား ဆက်လက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် ထိုးစစ်ဆင် နေခြင်းဖြစ်သည်။
Burma Karan state , passed this place by myself ( Karan Area )
တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ် ။တောပုန်းရွာတချို့ ဟာ ယခုအထိ ၀ါးခွက်နဲ့့ထမင်းကြမ်းကြမ်းတွေစားနေတုန်းပါ။ လူတယောက်အဖြစ်ရယ်လို့ မွေးဖွားလာပြီးတဲ့ နောက် လူတွေ မှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးအမျိုး လူတွေရဲ့သမိုင်းနဲ့ အညီပြောင်းလဲရမယ့် အဆင့်အတန်းမျိုး သူတို့ လိုညီအစ်ကို တိုင်းရင်းသားတွေ ဒီစစ်အာဏာရှင် ရှိနေသမျှကာလပါတ်လုံး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့သူ တို့ တတွေ ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ရပ်တည် အသက်ရှင် နေကြရမှာပါ။ ဒါဟာ ကရင်ဒေသတခုတည်းဘဲ ရှိပါသေးတယ် ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးစုတွေဟာ သူ့ နည်းသူ့ ဟန်နဲ့ဒီစစ်လက်နက်ကိုင် အာဏာရှင်တွေ ရဲ့ ဒါဏ်ကို အချိန်နှင့် အမျှတွေ့ ကြုံ ခံစားနေကြရတယ်ဆိုတာ တကယ်ရင်ထဲ က တွေးပြီး ခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဗမာပြည်တပြည်လုံးဟာ နှစ်အဆက်ဆက်မှိုင်းအတိုက်ခံခဲ့ ရတဲ့ ဘ၀ ကျတော်အပြင်ကို နဲနဲလှမ်းပြီးအဝေးကနေကြည့်တဲ့ အခါ ပိုပြီး နားလည်လာပါတယ်။တချိန်က ဗမာပြည်မှာ နယ်ပယ်တွေမှာရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်ပြီး တိုင်းပြည်အုပ်ချူပ်သူတွေကို ပစ်ခတ်တဲ့ အကြောင်း မကြာခဏဆိုသလို ကြားရတော့ ၊ရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်ခဲ့ ဖူးတော့ ကြောက်ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ( အမိမြေမှသားကောင်းများ ) ဖြတ်ညှပ်ကပ်ရုပ်ရှင်ကို သတိရမိပါသေးတယ် ။ တကယ်တန်းကြတော့ အမှန်တရားတွေ ပျောက်နေတဲ့တဖက်သတ်ဆန်လွန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာတဲ့အခါ ကျတော် တိုင်းရင်းသားတွေကို ပိုပြီးခင်မင်လာပါတယ်။ကျတော် က ဗမာ စစ်စစ် ပါ အထူး သဖြင့်စစ်တပ်တွင်းက ဗမာတွေကို ပို မုန်းတီးလာပါတယ် ။ ကပ်ဖားရပ်ဖားဗမာတွေ ၊ ကတိမတည်တဲ့ ဗမာတွေ၊ ကျတော်မုန်းပါတယ် ။ ပြောတာ မယုံရင် ကိုယ်တွေ့လေ့ လာကြည့်ပါဗျာ။ TV မပြောနဲ့ဆပ်ပြာတောင် တသက်မတွေ့ဘဲ သေသွားတဲ့ သူတွေ ဗမာပြည် နယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ရှိတယ်ဆို တာ ။ စစ်ခွေးတွေကတော့ ရက်စက်တုန်း နှိတ်စက်ညှင်းပမ်းကောင်းတုန်းပါ ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Tuesday, April 14, 20090comments
လယ်သမားများ အကြွေးမဆပ်နိုင်သဖြင့် လယ်မြေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခံရ
လယ်သမားများ အကြွေးမဆပ်နိုင်သဖြင့် ငွေတိုးချေးသူများက လယ်မြေနှင့် အိမ်များ သိမ်းဆည်းသွားသည်ကို သက်ဆိုင်ရာသို့ စာတင်တိုင်းတန်းထားသော်လည်း တစုံတရာ ဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိသည့်အတွက် ရွာသားများ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ကွန်ကလပ်ကျေးရွာမှ လယ်သမား ၆၂ ဦးထံမှ လယ်မြေများ၊ လူနေအိမ်၊ နွားများနှင့် လှည်းများကို ပြီးခဲ့သည့်လလယ်ခန့်မှစ၍ ဦသိန်းဇော်နှင့် အခြားငွေတိုးချေးသူများက ခြိမ်းခြောက်ကာ သိမ်းယူသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံလယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က သူတို့ဆီက ပိုက်ဆံကို ၇ ကျပ် - ၈ ကျပ်တိုးနဲ့ ချေးပြီးတော့ မြေဆီသြဇာအတွက် ယူသုံးရတယ်၊ စာချုပ်တွေပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးယူကြတာပဲ၊ အရင်နှစ်တွေက ပြေလည်ပေမဲ့ ဒီနှစ်ကျတော့ မကျေတဲ့အခါကျတော့ စာချုပ်ကိုပြပြီး ပုဒ်မ (၄၀၆/၄၂၀) နဲ့ ရဲစခန်း၊ တရားရုံးတို့မှာ အမှုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့လဲ ကြောက်လန့်ပြီးတော့ ရယကလူကြီးရှေ့မှာ ညှိပြီးတော့ ပေးလိုက်ရတာ” ဟု လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
ငွေတိုးချေးသူများ သိမ်းယူသွားသည့် ပစ္စည်းများမှာ လယ်ဧက ၂၁၁ ဧက၊ နွား ၂ ကောင်၊ လှည်း ၃ စီးနှင့် လယ်မြေမရှိသူများက ခြံမြေနှင့် အိမ် ၃ လုံးပါဝင်ကြောင် ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “ဒီနှစ်ကျတော့ နာဂစ်ဒဏ်ကြောင့်လဲ ပါတယ်၊ နောက် လယ်သမားတွေမှာက မြေဆီလဲ မရတော့တဲ့အခါကျတော့ စပါး၊ ပဲ မကောင်းဘူး၊ အထွက်နည်းတယ်၊ ဈေးကလဲမကောင်းတော့ အကြွေးမဆပ်နိုင်ဖြစ်ကြတာ၊ အခု ကျနော်တို့ အရမ်းကို ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ဗျာ၊ လယ်သမားက လယ်မရှိတော့ စားရသောက်ရမဲ့ဘဝ ရောက်နေတာပေါ့” ဟု အဆိုပါလယ်သမားက ပြောသည်။
လယ်မြေအသိမ်းခံလိုက်ရသည့် လယ်သမားများအနေဖြင့် ရယကအဖွဲ့ဝင်များအကူအညီဖြင့် မြို့နယ်မြေစာရင်းဌာန၊ မြို့နယ်(မယက)နှင့် ခရိုင်အထိ စာရေးတင်ပြ တိုင်တန်းထားသော်လည်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ မြို့နယ် (မယက)၊ (ခရက)၊ မြေစာရင်းတို့ကို (ရယက)တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး စာတင်ထားတာ တပတ်လောက်ရှိပြီ၊ အခုထိတော့ ဘာမှ ဖြေရှင်းမပေးသေးဘူး၊ ငွေတိုးချေးတဲ့သူတွေက မြို့ပေါ်ကလူတွေလဲ ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ရွာထဲကတော့ ကိုသိန်းဇော်ဆိုတဲ့သူပါတယ်၊ ကျန်တဲ့တွေ နာမည်တွေတော့ ကျနော်မသိဘူး” ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
ထိုင်းနုိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အစုိုးရ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူတွေကို ထိုင်းစစ်တပ်က တနင်္လာနေ့ မနက် အာရုံမတက်ခင်မှာ စတင် ဖြိုခွင်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စုဝေးနေတဲ့ ဆန္ဒပြသူ အများအပြားကို ဖြိုခွဲဖုို့အတွက် စစ်တပ်က စတင်လုိုက်တဲ့ နောက်ပုိုင်းမှာ အစုိုးရ တပ်တွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကြား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ထိခုိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုတွေလည်း ရှိနေတယ်လုို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ စစ်တပ်ဟာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဖြိုခွဲဖုို့အတွက် ညင်သာတဲ့ နည်းတွေနဲ့ စတင်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ပုိုင်းမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိမ်နှင်းဖုို့ ရှိတယ်လို့ စစ်တပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်ဆန်းထွေပါ ကပြောကြောင်း အေဖက်ပီ သတင်းက ရေးသားပါတယ်။ စစ်သားတွေဟာ မျက်ရည်ယုိုဗုံးတွေကို သုံးဖို့လည်း ရှိတယ်လုို့ ပြောပါတယ်။
မစ္စတာ ထက်ဆင် က ပြည်သူ့ တော်လှန်ရေး တရပ်ကို ဆင်နွှဲဖုို့အတွက် ဘန်ကောက်မြို့မှာ လာရောက် စုဝေးဖုို့အတွက် သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေကို တနင်္ဂနွေနေ့ အစောပိုင်းမှာ တုိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လုို့ သူ့ထောက်ခံသူတွေကို ထို်င်းအာဏာပိုင်တွေက တုိုက်ခုိုက်လာမယ်ဆုိုရင် ထုိုင်းနုိုင်ငံကို ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ တယ်လီဖုန်းက တဆင့် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀ိက်ချာချီဝ ကတော့ သူတုို့ အစုိုးရ အဖွဲ့က နိုင်နုိုင်နင်းနင်းနဲ့ ထိန်းထားနုိုင်ပါတယ်လုို့ တနင်္ဂနွေနေ့ ထုိုင်း ရုပ်သံက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Monday, April 13, 20090comments
အနှစ် 20 ကျော် စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ လက်ခုပ်ထဲက ရေအဖြစ် ဗမာပြည်ကျရောက်ခဲ့ရတာဟာ အဓိက အကြောင်းရင်း2ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအချက်က အဆုံးစွန်ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှု သံမဏိအုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို အာခံဆန့်ကျင်သူ ပုန်ကန်တော်လှန်သူမှန်သမျှ အပြင်းအထန်နှိပ်ကွပ်သုတ်သင်ဖြိုခွင်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ ဗမာပြည်ကျောင်းသား/သူ ရဟန်း ရှင်လူတွေ စုဝေးလှုပ်ရှားအုံကြွပြီး ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုခဲ့ကြတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ။ အကြမ်းဖက်ရက်စက်ယုတ်မာ သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် အသက်သွေးချွေးမြောက်များစွာစတေးခံရလို့ နောက်ဆုံးတော့ အားမတန် မာန်လျှော့နိဂုံးချုပ် ရတာချည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒုတိယအချက်က စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲအောင် နိုင်ငံတကာရဲ့တိုက်တွန်းဖြောင်းဖြချော့မော့မှုနဲ့ ဖိအားပေးအကြပ်ကိုင် ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ ပြည်သူတွေလက်ထဲ ဒီမိုကရေစီ အပ်နှင်းဘို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာဇီယံနိုင်ငံတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စထက် ဗမာပြည်နဲ့စီးပွား ကုန်သွယ်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကရတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေးစဉ်းစားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ဗမာပြည် နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံပါ။ နယ်စပ်တလျှောက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး တည်ငြိမ်ရေးဟာ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ အစဉ်တစိုက် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။ သာဓကအားဖြင့်ဆင်းရဲ ကြပ်တည်းတဲ့ ပူပင်သောက ဘ၀ကနေ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ထိုင်းနယ်စပ်ကို ဗမာပြည်တိုင်းရင်းသားများခိုလှုံလာ ကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးနဲ့ ပြဿနာကြီးမားစွာ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းအစိုးရအဆက် ဆက်ကတော့ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးကိစ္စ ကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာ မလုပ်ပါဘူး။ အာဇီယံကလဲအပြုသဘောဆောင် ဆက်ဆံမှု Constructive Engagement ပေါ်လစီနဲ့ဘဲ မျက်နှာလွှဲခဲပြစ်လုပ်နေပါတယ်။
ဗမာအာဏာရှင်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတောင်းဆိုသူတွေ၊ သဘာထားကွဲလွဲ သူတွေအပေါ် ဘယ်လောက်ဘဲ အကြင်နာကင်းမဲ့စွာ စစ်အင်အားသုံး အပြတ်ဖြိုခွင်းနှိပ်ကွပ်ခဲ့ပေမဲ့ အဖိနှိပ်ခံရဟန်း ရှင်သူကျောင်းသား ပြည်သူတွေ အဖို့ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်ရဲအောင် ငုံ့ခံမြဲငုံ့ခံနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မီးခဲပြာဖုံး အနေ အထားမှာအားမွေးရင်း အချိန်အခါ အခွင့်အလမ်းနဲ့ချက်ကောင်းကို အသိရှိရှိ သတိကြီးကြီးနဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင်တို့နှိပ်ကွပ်ချုပ်ခြယ်တိုင်း၊ ရက်စက်ယုတ်မာစွာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းတိုင်း၊လက်နက် အားကိုး ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်တိုင်း၊ အတိုက်အခံတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချတိုင်း၊ ပြည်သူတွေက အကြောက်တရား အောက်မှာ တကြောက်ကြောက် ကြောက်ဒူးတုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရောင်နီဖြိုးဖြိုးကိုအစပြိုးခဲ့တဲ့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံလဲ ပေါ်ပေါက်ခဲ့စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ 2007 စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလဲ ဖြစ်ထွန်းနိုင်စရာ အကြောင်း မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။
လက်ရှိသမယအခါကာလ အနေအထားမှာ ဗမာပြည်အပေါ် စစ်အာဏာရှင်တွေဆက်လက်ပြီး အရိပ်မဲကြီးနဲ့ အမှောင် တိုက်သွင်းဘို့ ပြည်သူလူထုက ဒီ့ထက်ပို မျက်စိစုံမှိတ် အောင့်အီးသည်းခံလို့ မရတော့ပါဘူး။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအပေါ် ဗမာဖက်ဆစ် နာဇီတွေရဲ့ ဒီ့ထက်လူမဆန်စွာ အကြမ်းဖက်နှိပ်ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်တဲ့အနေအထားကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူများစိတ်ဝင်စားအာရုံ စိုက်လာတာတင်မက စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရလဲ ပိုပိုပြီး ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့ပါတယ်။
အလှမ်းမဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ် နောင်တစ်နေ့မှာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးရဲ့ ကြီးမြတ်ထွန်းပြောင်တဲ့ အင်အားဟာ လက်နက် အားကိုးလက်တဆုပ်စာ စစ်အာဏာပိုင် လူတစုရဲ့မတရားကြီးစိုးအုပ်ချုပ်မှုကို မုချ တွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆို တာ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ်စံနမူနာပြသခဲ့ပြီးပါပြီ။
ပသို့ဆိုစေ၊ လက်နက်ဆိုလို့ အပ်တစ်ချောင်းမှ မရှိတဲ့ အမှန်တရားလိုလားသူ အပြစ်မဲ့ လူထုကို အချိန်မရွေးနှိပ်ကွပ် သတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ လူသတ်လက်နက် ပိုင်ဆိုင်သူ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရဲရင့် ပြတ်သားတဲ့ အားမာန်အပြည့် လှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ စစ်အုပ်စုအပေါ် UN, US, EU, ASEAN, တရုပ်၊ ကုလား၊ ရုရှားစတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများနဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများရဲ့ ဖိအားပေးမှုကလဲ အထူးအရေးပါအရာရောက်လှပါကြောင်း။
28/9/2007 မတိချွန်းအယ်ဒီတာ့အာဘော်မှ ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်သည်
သျှမ်းပြည်အနှံ့ လောင်းကစားဝိုင်းများဖွင့် - ဒေခံအာဏာပိုင်များ အပြိုင်ဘော်ချက်
ယခုနှစ်နွေရာသီ သျှမ်းပြည်မြို့နယ်အတော်များများ ရှင်ပြုပွဲ နှင့် အလှူပွဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကျင်းပချိန် နယ်မြေခံစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များက အကြောင်းအမျိုးမျိုးဘမ်းပြပြီး ရံပုံငွေအတွက်ဟုဆိုကာ လောင်းကစားဝိုင်းများဖွင့်လှစ် - သိန်းချီ အခွန် ကောက်ယူကြောင်း ဒေသခံလူထုကဆိုသည်။
လွယ်ခေါ် ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြုပြင်မွမ်းမံရေးအတွက် ဟုဆိုကာ ကျေးသီးမြို့နယ် မယက ဥက္ကဌ ဦးခင်လတ်က ခလရ ၁၃၁ တပ်ရေးဗိုလ်ကြီး ရဲမြင့်အောင်အား ဧပြီလ ၃ ရက်မှစ၍ ယခုထက်ထိ ကျေးသီးမြို့ ဘော်လုံးကွင်းတွင် လောင်းကစားဝိုင်း ကန်ထရိုက်ဆွဲခွင့် ပေးသည်ဟု ဆိုသည်။ လောင်းကစားဝိုင်းများ အခွန်ကျပ်ငွေသိန်း ၁၅၀ထည့်ရ မည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။
လောင်းကစားရုံ၊ ပွဲဆိုင်တန်း၊ ဇာတ်စင်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုများမှ ရွာခံကျေးလက်လူထုအား ၀ါးလုံး အလုံးရေ ၇၀ မှ ၁၀၀ အထိ နွားလှည်း/ထော်လာဂျီတို့ဖြင့် အလကားတင်ပို့ရပြီး အဓမ္မလုပ်အားလည်း ဆင့်ဆိုခဲ့ကြောင်း ကျေးသီးမြို့ခံ တဦးကပြောပြသည်။ မယက ဥက္ကဌ ဦးခင်လတ်သည် ဖယ်ခုံဘက်တာဝန်ကျစဉ် ဘိန်းခြံအခွန် ကောက်စားမှုဖြင့် နာမည် ကြီးပြီး ယခုနှစ်ဦးပိုင်းမှ ကျေးသီးသို့ရောက်လာသည့် မယက ဥက္ကဌအသစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
ထို့အတူလဲချားမြို့ ၌လည်း မတ်လ၂၉ ရက်မှစ၍ ၁၀ ရက်တိတိ လောင်းကစားဝိုင်း ပြုလုပ်ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဒေသခံ တဦးက - “ကျနော် တို့မြို့မှာ ကစားဝိုင်းဒိုင်က ဒုရဲအုပ်သိန်းဦး၊ မယကဆီမှာ ပွဲမိန့်ယူတယ်။ အကြောင်းပြချက် ကတော့ မြို့တော်စည်ပင်လှပရေးအတွက် လဲချားမြို့ မြောက်ဘက်နားမှာရှိတဲ့ နောင်ခမ်း ကန်ပျက်ပြုပြင်ဖို့ ရန်ပုံငွေ အတွက်တဲ့။ ဈေး ဆိုင်တန်းနဲ့အတူ လောင်းကစားဝိုင်းအကြီးအကျယ်ဖွင့်တယ်။ အခွန်သန်းချီကောက်တယ်။ မြို့နယ် ဥက္ကဌ အပြင် ခမရ ၅၁၅ နဲ့ ခလရ ၆၄ တို့ကိုလဲခွဲဝေပေးကျွေးရတယ်လို့ပြောတာဘဲ။ ရပ်မိရပ်ဖ တွေကတော့ သားသမီး တွေ လောင်းကစားဝိုင်း နေ့ညမပြတ်သွား၊ အိမ်သုံးစရိတ်ထဲ နှိုက်ယူသွားတဲ့အတွက် မိသားစုစားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်လို့ ငြီးနေကြတယ်။ နောက်ပြီး ပွဲဆူညံသံနားငြီးလွန်းလို့ အိပ်မရဘူးတဲ့။ ဆိုင်ကယ် သူခိုးတွေလဲ အရမ်းများလာ တယ်၊ အဓမ္မလု ယက်မှုတွေလဲ မကြာခဏဘဲ” - ဟုဆိုပါတယ်။
၀ိုင်း ၂၀ ကျော်ရှိသော အံစာတုံးလိမ့် (ကုံးကင်း)၊ ဟိုင်းလိုး နှင့် ၃ ကောင်ဂျင်ဝိုင်းများက တညလျှင် အခွန် ၁ သိန်း ၁ သောင်း ပေးရကြောင်း၊ ၃၆ ကောင်(ထီ)၊ လေးကောင်ဂျင် နှင့် ဖိုင့်ကျူး (ကျွဲကျိုဖဲ) စသည့်ဝိုင်းကြီးများက ပွဲသိမ်းချိန် အထိ ၆ သန်း အခွန်ဆောင် ရကြောင်း၊ ၁၀ ပေ ဆိုင်ခန်းတခန်း ၁ သောင်း ၅ ထောင် အခွန်ပေးဆောင်ရ ကြောင်းဆို သည်။ ပွဲစည် စေရန် ရှမ်းဇာတ်သဘင် ကို တစ်ည ၃ သိန်းဖြင့် လောင်းကစားဝိုင်းဒိုင်က ငှါးလာခဲ့ကြောင်း၊ “ပွဲဒိုင်ကသန်း ၃၀ ကျော် အခွန်ရမယ်။ ပွဲအတွက်အသုံး စရိတ် ဟိုကြွေးဒီကြွေးခက ၁၅ သန်းလောက်ဘဲ ကုန်တယ်ဆိုတော့ သူ့မှာ အနည်းဆုံး ၁၆ သန်းလောက်ကျန်တယ်” ဟုဆို၏။
ပြည်ထောင်စု အမြစ်တည်ရာ ပင်လုံမြေတွင်လည်း လောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်လှစ်မှုရှိပြီး မိုင်းကိုင်မြို့တွင်မူ ၀မ့်ဖွီးကျေးရွာ အုပ်စု၌ ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ဒေသခံများကဆိုသည်။
သျှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်လေလာသူတဦးက - “ကျနော်တို့သျှမ်းပြည်ထဲ အခုလို လောင်းကစားဝိုင်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်မလုပ်တာကြာပြီ၊ ပထမအချက်က စစ်အာဏာပိုင်တွေ လူထုကိုအာရုံလွှဲတာဘဲ၊ နိုင်ငံရေးဘက်စိတ်မ၀င်စား အောင် ပေါ့။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရန်ပုံငွေရှာထား တာဖြစ်ဖို့များတယ်။ နောက်တခုက - စစ်အစိုးရဌာနချုပ် နေပြည်တော် အမိန့်အရ စစ်တိုင်း၊ ဒကစ၊ ဗျူဟာ၊ တပ်ရင်း၊ တပ်ခွဲတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေ ရှာခိုင်း တယ်၊ ဆိုလိုတာက အထက်က လစာအပြည့်အ၀ မပေးမကျွေးနိုင်လို့ အခုလိုတိုင်းပြည်အနှံ့ လောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်လာ တာဖြစ်တယ်” - ဟုဆို ၏။
၂၀၀၉ နွေရာသီတွင် သံလွင်အရှေ့ ခြမ်း မိုင်းတုံမြို့နယ် ပုံပါကျင်မြို့နယ်ခွဲ ရှင်ပြုပွဲ ကိုအကြောင်းပြုပြီး ဒေသခံ စစ်ဗျူဟာမှူး အား လောင်းကစားဝိုင်းဒိုင်က လာဘ်ငွေထိုးကာလောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်ခဲ့သည်။ မိုင်းပြင်းမြို့နယ် တုံတာတိုက်နယ် သိမ် တော် အလှူပွဲတွင်လည်း လောင်းကစားဝိုင်းရှိခဲ့သည်။ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အပါအ၀င် သံလွင် အနောက်ခြမ်း၊ သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မြို့တော်တော်များနှင့် မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် ၊ နမ့်ခမ်း၊ လားရှိုးတို့တွင်လည်း လောင်းကစားဝိုင်းများဖွင့်လှစ်ကြောင်းဒေသခံများ က ဆိုသည်။